I-China Ce Certification Anti Virus Elahliweyo I-Kn95 yeMask yokuThengisa kunye neFektha | Zhongmaohua
Imodeli: HXW - M025
Ukusetyenziswa kwemaski: iimaski zokhuselo kwezonyango
Isiqinisekiso: FDA, CE, ISO
Uhlobo lweemaski: ukhuseleko
Ezothutho: ulwandle, moya
Isatifikethi: ISO, CE, FDA
I-mask eqinisekisiweyo yokulahla i-antivirus ye-KN95
I-lining ethambileyo: Ikotoni ehambelana nolusu, ukudibana ubuso nobuso, ukuphucula intuthuzelo
Yenza ukubonakala kwebhulorho yeempumlo ukunciphisa ukuphazamiseka kwimbonakalo yentsimi kunye nokuphucula ukugqobhoza kwentsimi ebonakalayo;
Ikotini elasteni yendlebe ebhendi, akukho-hairpin, phucula intuthuzelo.
Isiponji sempumlo etywinwe ngokupheleleyo iqinisekisa ukuvalwa kwempumlo kunye nokwenza ngcono intuthuzelo.
Iplastiki yamandla aphakamileyo ihambelana nezinto zentsimbi, imbonakalo ye-h-umzobo, imaski yegesi eyi-9595 ineziphumo ezi-ntathu.
Ikliphu eguquguqukayo yempumlo yocalulo olunombala olula
Ukhuseleko nococeko: ngokuhambelana nomgangatho gb2626-2006. Ukukhusela ubuncinci ungabi yi-96% yegrisi.
Imaski ye-Kn95 isetyenziswa ngokubanzi kulwakhiwo, ukumbiwa kwemigodi, ilaphu, impahla, izihlangu kunye nokwenza imicu, ukulungisa iinkuni, amayeza, izixhobo zombane, ukuvelisa iimoto kunye namanye amashishini ukukhusela amasuntswana othuli
Igama lemveliso: Imaski eselwayo ye-Kn95
Isixhobo: umqhaphu wekotoni, inyibilikise isitshizi
Ububanzi: 7.5 * 15.5cm
Amanqaku: unokuphefumla, ukhululekile kwaye-ulusu
Imisebenzi: anti-ukungcola, uthuli, pm2.5, ismog, inkungu, impova
Imigangatho: gb2626-2006 kn95
1. Iimveliso zethu zifumene isiqinisekiso se-FDA kunye ne-CE
2. Ukuhanjiswa okukhawulezayo, ii-oda phantsi kwesigidi, sinika ukuhanjiswa ngaphakathi kweentsuku ezingama-1-7
3. Umgangatho olungileyo kunye neXabiso eliVakalayo: sicaphula intengo ye-ex-fektri, kwaye siyimizi-mveliso, kwaye ixabiso lethu ngokubanzi lixabiso eliphantsi kunenkampani yorhwebo.
4. Inkonzo eSebenzayo: sinakho ukuvelisa ngokwendlela yoyilo lwakho
5. Yamkela zombini iincinci kunye nee-odolo ezinkulu
6. Ubuchule boPhando oluqinileyo kunye nokuPhuhliswa kwezakhono: Kwiminyaka yakutshanje, iHongxiangwen iye yaqhubeka ngokuphuhlisa kwaye yandisa iindidi zayo zemveliso. Ngokusekwe kokoqobo Izinto zeSki kwaye I-Strap yenkxaso , sele siqale ukungena kwicandelo lokhuselo lonyango kwaye saqulunqa uthotho lwe Izixhobo zokukhusela ezonyango njenge-mask95 ye-KN95, Imaski yobuso elahliweyo , I-Thermometer ye-infrared Uzibophelele ekukhuseleni impilo yakho yasemzimbeni.
Ngaba ujonge i-Kn95 Mask CE Umvelisi kunye nomthengisi? Sinokhetho olubanzi ngamaxabiso amakhulu ukukunceda ukuba uyile. Zonke i-Diskosable Kn95 Mask CE ziqinisekisiwe ngumgangatho. SiyiTshayina lemvelaphi yaseTshayina ye-Anti Virus Kn95 Mask CE. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Iindidi zemveliso: KN95 Mask
Edlulileyo: Ifektha yesiTayile esilahliweyo yeTekhnoloji yeVenkile engaselwanga 3ply yoBuso beMaski
Okulandelayo: I-FFP2 N95 5 Imaski yoBuso obonakalayo
Umzi mveliso oSuselwa kwiFin China